Dib u eegista Semalt: Waa maxay, sidee bay u shaqeysaa?
Ganacsi kasta oo yar wuxuu doonayaa inuu kordhiyo taraafikada shabakadooda. Meherad ganacsi oo khadka tooska ah, waa aasaaska guushooda.
Su’aasha ugu weyni waa “Sidee?”
Xagee u jeesataa adeegyada SEO-ga ee bilaashka ah iyo kan lacagta ah ee runtii shaqeeya?
Hagaag, hal qalab oo si weyn wax uga beddeli kara waxqabadka goobtaada iyo taraafikada waa Semalt.
Marka dib-u-eegista Semalt-ka, waxaan kaa caawin doonnaa inaad ogaato inuu runtii mudan yahay.
Waa tan waxa aan dabooli doono:
Waa maxay Semalt.com?
Dib u eegista Macaamiisha Semalt
Sida loo Adeegsado Semalt
Gunaanad Kama Dambeysa
Halkan Semalt, waxaan leenahay isku xirnaan qalab loogu talagalay SEO (Search Engine Optimization).
Waxaan joognaa himilo si aan uga dhigno ganacsatada internetka inay ku guuleystaan, oo aan ku koobneyn oo keliya SEO, laakiin sidoo kale adeegyo sida horumarinta webka, falanqaynta, iyo soosaarka fiidiyowga. (Inbadan oo adeegyadeena ah kadib).
Laakiin annagu ma nihin shirkad kasta oo SEO ah. Waxaan jecel nahay aadanaha ku lug leh warshaddan.
Oo waxaad la kulmi kartaa xubnaheena kooxda (iyo qulqulka) xubnaha kooxda , laga bilaabo horumarinta ganacsiga ilaa guusha macaamiisha ilaa ilaha aadanaha. Waad arki kartaa waxa qof walba doorkiisu yahay, wax ka baro waxbadan oo hiwaayadeena ah, ka dibna waad na soo wici kartaa waqti kasta oo habeen iyo maalinba ah. (Waxaan ku hadli karnaa Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Turki, iyo luqado kale oo badan!)
Waxaa jira hal xubin kooxda ah oo aan si gaar ah ugu faraxsanahay: Turbo.
Markii aan u dhaqaaqnay xafiisyadeena cusub 2014, waxaan ku aragnay Turbo dheriga ubaxa duug ah. Milkiilaha xafiiska hore ayaa isaga ka tagay halkaas.
Oh, waa inaan sheegno in Turbo ay tahay qoolley.
Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeyay, waxaan u qaadnay inuu yahay xayawaanka xayawaanka ah iyo mascot shirkadda. Hadda wuxuu ku nool yahay aquarium weyn oo ku yaal meesha aan ku nool Yukreeniyaan.
Marka maxay xubnaha kooxdayadu adiga kuu sameyn karaan? Dhammaanteen waxaan ku saabsan nahay SEO.
Kordhinta Mashiinka Raadinta ayaa ah goorta aad hirgalinayso howlo gaar ah si aad uga dhigto shabakadaada mid muuqata mid sare natiijooyinka raadinta. SEO waa dhan dabiici ah, sida ka soo horjeedda helitaanka xayeysiisyo mushahar leh.
Sidaa darteed haddii aad leedahay degel internet oo aad rabto inaad kordhiso taraafikadaaga, SEO wuxuu u baahan yahay inuu qayb ka noqdo qorshahaaga.
Xaruntu waxqabadka SEO ee agagaarka ka farxiya mashiinka raadinta ugu caansan - Google. Googlena waxay leedahay algorithm kaas oo kala sarreeya natiijooyinka raadinta iyadoo lagu saleynayo waxa ay rumeysan tahay baadiyuhu inuu raadinayo.
Heerka ugu hooseeya, waxaad u kala qaybin kartaa SEO laba qaybood: bogga-ka SEO iyo bogga-ka-baxa SEO.
Bogga bogga waxaa loola jeedaa qodobbada aad gacanta ku haysa ee ku jira websaydhkaaga. Tan waxaa ka mid noqon kara xawaaraha goobta, hufnaanta koodhka, tayada waxa ku jira, iyo qaabeynta iyo qaabeynta bartaada. Kuwani dhammaantood waa kuwo aad muhiim ugu ah waxqabadkaaga SEO.
Bog-ka-baxsan SEO waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin dib-u-xirno laga helo bogag kale, gudbinta warbaahinta bulshada, iyo xeeladaha kale ee suuqgeynta ka baxsan websaydhkaaga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka baxsan bogaga SEO-ga waxaa ka mid ah tirada dib-u-eegida iyo tayada dib-u-eegnadaas.
Way kuu fiicantahay haddii goobaha kale ee tayo sare leh ee warshadahaagu ku xiraan bartaada. Google wuu jecel yahay tan wuxuuna u qiimeyn doonaa shabakadaada mid sareysa.
Si kastaba ha noqotee, waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto waa inaad siiso agab tayo sare leh si joogto ah. SEO waa ciyaar dheer.
Qiimeynta Google ee doorbidista ayaa imaan doonta haddii aad diiradda saarto abuurista waxyaabo la yaab leh. Dadku waxay kuguxiran doonaan bartaada waxayna halkaas u diri doonaan kuwa kale haddii aad wax weyn ka koobantahay.
Semalt waxay bixisaa isku xirnaanta adeegyada SEO, oo ah kuwa labixiyay iyo kan bilaashba. Asal ahaan, waxaan ka heli karnaa degelkaaga socodsiin iyo socodsiin iyo barwaaqo, kulligood hal saqaf.
Waa kuwan adeegyada aanu bixinno:
Platform Automatic Platform
Aynu si kooban u daboolo adeeg kasta. Tani waxay ku siin doontaa fikrad fiican oo ku saabsan waxa aad ka faa'iideysan karto.
Xirmadayaga 'AutoSEO' waa waxa aan ugu yeedhnay "guri buuxa" oo loogu talagalay ganacsiyada khadka tooska ah. Xirmadan, waxaad heleysaa:
Hagaajinta aragtida websaydh
Kor u qaadista bogga
Waxaad u abuuri kartaa shabakadaada cabsida leh. Waxaan ugu wanaajineynaa Google.
Adigoo adeegsanaya wax loo yaqaan "koofiyad cad" farsamooyinka SEO, waxaad ku hagaajin kartaa taraafikadaaga kaliya $ 0.99.
AutoSEO ayaa ugu fiican:
Milkiilayaasha ganacsiyada yaryar
Dusha sare ee adeegyada aasaasiga ah ee SEO - sida kobcinta gudaha, qaladka khaladka, qorista nuxurka, kasbashada isku xirnaanta, iyo taageerada - waxaad si aad ah uga heleysaa FullSEO.
Kooxdayada SEO waxay sameyn doonaan qorshe shaqsiyeed adiga iyo ganacsigaaga. Waxaan eegnaa waxaad ubaahantahay inaad darajayn sare sameyso kadibna hirgaliso qorshaha lagu hagaajinayo websaydhkaaga.
FullSEO ayaa ugu fiican:
Iyada oo la adeegsanaayo Semalt Web Analytics, waad awoodaa:
Hubi qiimeynta shabakadaada
Ka dhig boggaaga mid aad u hellan
Isha ku hay shabakadaha tartamaya
Hel warbixinno dhammaystiran oo ku sahabsan shabakadda
Si aad u ogaato sida loo hagaajiyo boggaaga, waxaad marka hore u baahan tahay inaad aragto qaybaha ka maqan. Falanqayntayada, waxaad ka heli kartaa ereyada muhiimka ah ee la soo jeediyo, waxaad ku ogaan kartaa waxa dadku ay raadinayaan, iyo muujinta sirta tartankaaga.
Falanqaynta Websaydhada Semalt ayaa ugu fiican:
Milkiilayaasha ganacsiga yar yar
Waxaan u dhaqaaqi doonnaa sida ugu wanaagsan ee aan kuugu dhisi karno shabakadaada. Waxaan abuurnaa degello websaydh ah oo qibrad leh oo xirfadlayaal soo dhoweynaya booqdayaasha kuna tilmaamaya jihada saxda ah.
Muuqaalka iyo xawaaraha websaydhkaaga ayaa saamaynaya heerkaaga boodhka iyo celceliska waqtiga aragtida bogga. Taasina waxay saameyn ku yeelan doontaa SEO-gaaga.
Taasi waa sababta shabakad kasta oo aan abuurnno ay tahay mid dhakhso badan, fududahay in lagu socdo, oo si buuxda loogu habeeyo SEO.
Fiidiyowgu waa goob had iyo jeer si joogto ah u caan ah. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay fiidiyowyo xirfad leh si aad uga dhigto goobtaada mid banaanka ah.
Kaliya maahan fiidiyowyo madadaalin oo ogeysiiya macaamiishaada, laakiin sidoo kale waxay ku sii hayaan boggaaga muddo dheer. Taasina waa wax ku fiican qiimeyntaada SEO.
Adeegyadeena soosaarka fiidiyowga, waxaan kugu caawin doonaa:
Waxaan xitaa bixinnaa karti xirfadeed cod dheeri ah!
Soosaaradeena fiidiyowga ayaa ugu fiican:
Si aan u daacadno, waanu sii wadi karnay waxsoosaarka iyo adeegyada. Taasi waa sababta oo ah waxaan jecel nahay waxa aan sameyno.
Laakiin way caawin kartaa in la maqlo waxa macaamiisheennii hore ay ka yidhaahdeen annaga. Marka waa kuwan qaar ka mid ah macaamiisha aan jecel nahay ...
Kristian oo ka tirsan MALO CLINIC ayaa yidhi: "Waxaan u adeegsanay Semalt ... inay noqoto degel heer qaran ah oo heerkiisu sareeyo. "... Haddii aad rabto inaad horumar ku sameyso darajo, Semalt ayaa ah talooyinka ugu fiican."
Wojtek oo ka tirsan shirkadda Msofas Limited ayaa yidhi: "Mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican SEO waa inaan sheegaa. Waxaan isku dayay shirkado badan oo SEO ah laakiin ma helin wixii aan doonayey. Laakiin Semalt ayaan ugu dambeyntii helay. ... Way fahmeen waxa boggaygu u baahan yahay waxayna ku wada qabteen hagaajinta ganacsigayga ugu dambayntiina waxay kordhisay dakhligeyga. "
Jose oo ku hadla afka Isbaanishka ee ka soo baxa Baja Properties ayaa yidhi: “Aad ayaan ugu faraxsanahay maamulahayaga Volodymyr Skyba dhammaan taleefanada soo socda, emaylka, iyo warbixinno toddobaadle ah. Waxaan ku jirnaa kaalinta koowaad dhowr isku darka ereyga furaha ee warshadeena isla markaana hogaamiyaasha ayaa garaacayay emaylkeena dhowr bilood hadda. In kasta oo aan ahay maamule degel, wali waxaan isweydiiyaa waa maxay sixirka ay u sameeyaan si ay tani u dhacdo. ”
Sida cad, macaamiisheena way na jecel yihiin. Oo annaguna waan jecel nahay dib u soo celiyaan!
Markaad degto bogga Semalt ee bogga , waxa ugu horreeya ee aad arki doontid waa aalad bilaash ah oo tuseysa tayada domainkaaga. Si fudud u gal URLka oo ku dhufo “Hadda Bilaab.”
Markaad sidaas sameyso kadib, waxaa lagaa rabaa inaad isqorto. Waxaan u sameynay howshan sida ugu fudud ee suuragalka ah - kaliya geli cinwaanka emaylkaaga, samee eray sir ah, oo noo sheeg magacaaga.
Waxaad awoodi doontaa inaad hesho warbixintaada, iyo cusboonaysiinno dheeri ah oo loosoo diro sanduuqaaga.
Diiwaangelinta kadib, waxaa lagu geyn doonaa shaashaddaada. Halkan waxaad ka arki kartaa darajooyinkaaga, ka heli kartaa falanqayn degel, waxaadna abuuri kartaa mashruuc cusub.
Dhinaca midig, waxaad arki doontaa ereyo-fure iyo darajo kasta midkasta. Xitaa waad ku dari kartaa ereyo-fure cusub oo waxaad arki kartaa warbixinta keyword-ga ee buuxa.
Adigoo booqanaya bogga falanqaynta bogga bidix, waxaad ka arki kartaa:
Sicirka dib u soo kabashada
Bogagga maalinlaha ah ee booqde kasta
Waqti maalinle ah goobta
Faahfaahinta macluumaadka SEO
Xawaaraha iyo adeegsiga
Serverka iyo xogta amniga
Is waafajinta mobilada
Talooyin ku saabsan sida aad u hagaajin karto boggaaga
Waxa kale oo aad aadi kartaa Xarunta Warbixinta tab si aad u abuurto mashruuc iyo warbixin laxiriirta.
Warbixintaada, waxaad ku dari kartaa miirayaasha, kala-saarista, kala-soocidda, iyo farriinta taariikhda. Intaas waxaa sii dheer, waxaad jadwal u sameyn kartaa sida iyo goorta warbixintaada loo soo saari doono oo adiga laguu soo diri doono.
Isku soo wada duuboo, waxaad ka heli kartaa macluumaad fara badan oo aad u faa'iido badan iyo tirakoob leh qalabkan bilaashka ah.
Dabcan, waad cusbooneysiin kartaa si aad xitaa caawimaad dheeraad ah uga hesho websaydhkaaga. Marka aan sidaa yeelno, waxaan kaa caawin karnaa inaad u fuulato ugu sarreeya natiijooyinka mashiinka raadinta, adigoo uga mahadcelinaya khibradeena, ilaha, aqoonta, iyo xubnaha kooxda heerka sare.
Dib-u-eegista Semalt-ka ayaa ku tusineysa sida ay waxtar u leedahay adeegyadan SEO-ga ah ee bilaashka ah iyo kuwa lacagta leh ee la siin karo waxay ku yeelan karaan heerkaaga websaydhka. Iyo sida ugu wanaagsan ee darajada goobtaada, ganacsigu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu abuuro.
Markaa hadaad raadineyso inaad horumariso khibradaada SEO iyo booqdaha, waxaan kaahelay dhamaan xaglaha.
Markaad hesho boggaaga bilaashka ah, waad isqori kartaa, isla markaana waan kula soo xiriiri doonnaa!